Saddexda Heer ee Nolosha – Vol: 01 – Cad: 11 – Indheergarad
HomeMaqaalloSaddexda Heer ee Nolosha – Vol: 01 – Cad: 11
August 20, 2019 Axmed Nuur Taarwale Maqaallo 0
Indheergarad – Ogoosto 20, 2019 – Lamtako – Vol: 01 – Cadadka: 11aad
Waxaa jira heerar dhawr ah oo kala duduwan isla markaana kala dandanbeeya oo qofka aadanaha ahi maro. Heerarkaas dhawrka ah qof ba in baa uu ka maraa. Dad aad u tiro yar oo fara ku tiris ah baa wada mara dhammaan heerarkaas oo dadka badidii heerka koowaad iyaga oo taagan baa cimrigoodu cagaha ka degaa kadibna iska Allaystaan. Dad kale iyaga oo dhawr heer gudbay oo “Wax kaa liita waa aad dhaantaa” iska ah kana doorroon kuwa halka meel taagan teer iyo aakhiro baa iyagana malakul mawdku ku soo kediyaa oo si xille ka yeelaa.
Heerka koowaad qofka ka tirsan waxa keliya ee uu isku hawlo waa baahiyaha asaasiga ah sida cuntada, hoyga, hu’ga iyo galmada. Intaas baa uu u noolyahay oo isaga oo haya ama ku tala jira ku dhintaa. Waa tabtaa xoolaha oo kale oo xooluhi intaas sidii ay ku heli lahayeen baa ay ka shaqeeyaan gabbal dhacay iyo waa soo baryay. Heerkaan waxa la yiraahdaa “Warmooge.”
Qof walba waxa madixiisa yarka ah mararka qaar ku soo dhaca su’aalo foolxun oo aan fiicnayn. Waxa aannu u niri waa “Su’aalo foolxun” waxa weeye in aan su’aalahaas la jeclayn oo mararna ay walwal wataan. Qolyaa waxa ay yiraahdaan “Shaydaan baa ku shuqul leh su’aalaha madaxa dadka soo buuxdhaafiya” waxa ayna dadka amraan in la iska cuudi billaysto oo aan la faarfaarin, dadkana aan lala wadaagin, la na sii daba gelin oo dad badan oo kooxda hore ee “Warmoogayaasha” ka tirsan baa u riyaaqa warkaas ay qolyahaasi ku andacoodaan. Qolyo tira yar baa ka dhega adayga hadalka ah: “Shaydaan baa ku shuqul leh su’aalaha madaxa dadka soo buuxdhaafiya.” Qolyahaas baa heerka labaad u tallaaba oo dareema in noloshu ka ballaaran tahay in la eryoodo cunto iyo galmo iwm.
Qolyahaasi waxa ay dareemaan walwal iyo walbahaar aan la la qabin se meel ay wax ka bilaabaan ma garanayaan oo waa dad heerkii koowaad ee Warmooganimada ka soo baxay oo aan war hayn. Dadkaasi iyaga oo aan cabsi muujin, fitnana ka baqayn baa ay su’aalihii naftooda iyo wixii ay is leeyihiin wax bay garanayaan u soo bandhigaan bal si wax uun warcelin ah loogu helo. Waxa ay sameeyaan weelayn oo yaysan jawaabo ba hayne su’aalaha ma diidaan.
Su’aalaha badan ee madaxooda ku soo dhacaya iyo su’aalaha ay meelahaas kale ka maqlaan ismaahin kuma ay dhaafaan, kama na cuudi billaystaan, deedafayn iyo aflagaadana uma gaystaan ee waxa ay la sugaan jawaabo. Qolyahaasi raadgur baa ay ku jiraan oo intaa waxa ay raadgurayaan jawaabaha su’aalo ay noloshu bartay. Waa dad wax ka maqan yihiin oo wax raadinaya. Isu ma arkan daf aqoon leh ee waxa ay isu arkaan waxmayaqaan ee warmooge u baahan in uu aqoon helo. Waxa ay sugayaan waa u barya oo sidaas baa aan “Waasuge” u niri.
Heerkaan Waasugenimada ahi waa xilliga ugu dheer ugu na qallafsan uguna wareerka badan ee qof maro. Dadka badidood iyaga oo heerkaas ku jira baa ay duqoobaan oo saliida iyo biyaha isku daraan kadib iil madoow ka soo jeestaan. Qofqof dhif ah oo soo baxa “markii tuke cad la arko” baa heerka saddexaad soo gaara. Waa heerka qofka ay u bidhaamaan wax uun jawaaba ah oo su’aalihii uu la daalaa dhacayay ku saabsan. Qofba in baa uu helaa oo qof baa dhawr su’aala ah hal mar jawaabo u hela qofna mid iyo labo baa uu wax u soo helaa. Markaas baa la yiraahdaa, “Hebel ama heblaayo oo waxaas iyo wexeer soo saartay ama soo kordhisay.” Muhiimada qofku markii hore ma aysan ahayn “ha lagu yiraahdo hebel ama heblaaya wax soo kordhisay” ee baadi doon dhib badan kadib baa uu su’aalo uu qabay jawaabo u la yimi.
Kumanaan kun oo hadiyadood, magac iyo maamuus midna qofkaasi wax wayn uma arko waayo waxa uu og yahay in ay madaxiisa dhooban yihiin kumaan kun oo su’aalood oo kala foolxun oo jawaabo u baahan. Soomaalida waxa aad ku arkaysaa ismadhibe iska faraxsan oo aan bela qabin, su’aal uu iswaydiiyayna aysan weligii maskaxdiisa dhexdeeda “deero deero kale u herdiyin”, shekigana ka dheeraada oo nolol warmooganima ah ku jira hadana ku leh in aan wax soo saara ama wax soo kordhiyaan rabaa si aan magac u yeesho. War illeen “LAX DHUKANI COL IYO ABAAR BA MOOG!”